ရော်ဘင်ဆင် et al ၏ "Dopamine နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ" စက္ကူပေါ်တွင်မှတ်ချက်။ (2007) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ရော်ဘင်ဆင် et al ၏ "Dopamine နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ" စက္ကူပေါ်တွင်မှတ်ချက်။ (၂၀၀၇)
ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2007 မတ်လ; 29 (1): 89-90 ။
Corchs က F, Bernik အမ်
မှတ်ချက်ပေးပါ - Dopamine နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ။ [ဗြာ Bras Psiquiatr ။ ၂၀၀၆]
အာရုံကြောသိပ္ပံဖြစ်စဉ်များအဖြစ် phobic-ရှောင်ရှားခြင်းမမှန်မှုများအတွက် serotonin ထက်အခြား neurotransmitters ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1 ၎င်းတို့အနက်မှ dopamine သည်တိုက်ရိုက်ရောအခြားစနစ်များနှင့်ပါ၎င်း၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏အယူအဆနှင့်သဘောတူညီချက်တွင် phobias နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမရှိခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုရောဂါ (SAnD) နှင့်လက်အောက်ငယ်သားမျောက်များ၏လေ့လာမှုများအကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော phobias နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရေးကြီးသောလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုအချို့ရှိသည်။
တစ်ဖွဲ့လုံးကသဲနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အခြားရှုထောင်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောယူဆချက်ကိုအနီးကပ် dopaminergic စနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစာစားချင်စိတ် / အပြုသဘောအားဖြည့်အပြုအမူတွေအကြားပဋိပက္ခလည်းမရှိသည့်အတွက်အခွအေနေအဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်၏စိတ်ကူးပေါ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသည်2 နှင့် serotonergic စနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သော / ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတွေ, လွတ်မြောက်ရန်။3
အခွားသောစာရေးဆရာများထားပြီးအမူအကျင့်ချဉ်းကပ်မှုစနစ်နှင့်တိုက်ပွဲ / လေယာဉ် / အေးခဲမှုစနစ်အကြားပဋိပက္ခဖော်ပြ, စိုးရိမ်ပူပန်ရှိသူတို့နှစ်ခုစနစ်များ၏အရေးပါမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။4 ဤနည်းအားဖြင့်ပြုလုပ်စဉ် serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါး dorsal periaqueductal မီးခိုးရောင်အမှု၌ယင်း၏အရေးယူမှတဆင့် Proximity အန္တရာယ်မှမှေးရာပါရန်ပွဲသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တုံ့ပြန်မှုတားစီးမယ်လို့ထင်ကြေးမှယုတ္တိပါလိမ့်မယ်,3 dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါး mesolimbic စနစ်က၎င်း၏လုပ်ရပ်များမှတဆင့်လှုံ့ဆျောမှု / အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်,2 အရှင် serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားလာ။
ဒါဟာ DA သူ့ဟာသူတစ်ခု "anxiolitic" ပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ bupropion ကဲ့သို့သော dopaminergic ဇီဝရနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောဆေးများသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရောဂါများအပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်တစ်သမတ်တည်းမကျပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိုးမြှင့် DA ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုတွင် Cloninger နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိသည်5 သဲထဲတွင်အမူအကျင့်ကုသမှုအောက်ပါကိုယ်ပိုင်ညွှန်ကြားအတိုင်းအတာနှင့်လွှတ်။ ဒီအရို DA လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းရှိလော့။
Felipe Corchs, Márcio Bernik
ဆေးပညာ, Universidad de Sao Paulo (USP) ၏ကျောင်းစာအုပ်
ဆောပိုလို (SP), ဘရာဇီး
1။ ရော်ဘင်ဆင် HM, hood ကိုက S, ဘဲလ်ကို C, Nutt ဃ Dopamine နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr. 2006;28(4):263-4.
2။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience။ 2004; 5: 483-94 ။
3။ Deakin JF, Graeff အပြည်ပြည်သွား။ ကာကွယ်ရေး 5-HT နှင့်ယန္တရား။ J ကို Psychopharmacol။ 1991; 5: 305-15 ။
4။ မီးခိုးရောင်ဂျာ McNaughton N. စိုးရိမ်စိတ်၏ neuropsychology: septo-hippocampal စနစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသို့တစ်စုံစမ်းရေး။ ed 2nd ။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2000 ။
5။ ပုံတူပွားခြင်း CR, Svrakic DM, Przybeck TR ။ စိတ်ထားနှင့်အကျင့်စရိုက်တစ်ခု psychobiological မော်ဒယ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု. 1993;50(12):975-90.